Shona (sn) : Template “debian-installer” : Raring (13.04) : Translations : debian-installer package : Ubuntu
Usacherechedza mibvunzo ine uremu pasi pe:
Unokwanisa kusarudza mubvunzo ineuremu hwepasipasi yaunoda ku ona:
- 'kiritikau' kuitira maaitemu ayo angango gura sisitemu
pasina kupindira kwemushandisi.
- 'pamusoro' kuitira maaitemu ayo asina zvakarongwa zvinepfungwa.
- 'pakati' kuitira maaitemu kwawo ayo anezvakarongwa zvinepfungwa.
- 'pasi' kuitira maaitemu ayo anezvakarongwa zvino mushanda mu
Translated and reviewed by Tafadzwa on 2011-07-21
Se muyenzaniso, uno mubvunzo ineuremui hwe pakati,uyezve kana uremu wako hwangahuri 'pamusoro' kana 'kiritikau', iwe hawai ona uno mubvunzo.
Sandura uremu hwe debconf
Translated and reviewed by Tafadzwa on 2010-01-01
Translated by Garikai Dzoma on 2009-12-24
Reviewed by Tafadzwa on 2010-01-01
Contributors to this translation: Garikai Dzoma, Renias, Tafadzwa, Taru Zinyemba.